Sina Mpamboly trondro telo teboka / 3 4 5 6 7 ft mpiompy rotary amidy Factory sy mpanamboatra | Zhicheng
Mpamboly hitifitra teboka telo / 3 4 5 6 7 ft mpiompy rotary amidy
1GLN andian-tsarimihetsika mavesatra rotary miasa miaraka amina sisin-dàlana, azo alefa amin'ny traktera 25-180hp. Izy io dia mandray antsy maranitra mifatotra amin'ny seza antsy kapila, izay mety hianjera mololo ary mety hipetraka amin'ny tany sarotra. Izy io dia mifanaraka amin'ny tanimbary sy ny tany maina, izay mandray ny endrika eropeana sy ny teknolojia eoropeanina, miaraka amin'ny bika sy endrika tsara tarehy, izay mavesatra kokoa noho ny mahazatra Modely, fitoniana avo lenta, fampiasana betsaka kokoa ary fiainana maharitra.
Ny traikefa sy ny fahaizana teknikan'ireo injenieranay dia ahafahanay mamorona sy manondrana andiana High Speed ​​Rotary Tillers 1GN. Ireo rotavator ireo dia ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny fambolena mba hanomanana haingana ny tany hafafazana amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny kapila, ny fambolena ary ny planking. Natao tamim-pahamendrehana, ny laharanay dia fantatra amin'ny endriny matanjaka, ny fanoherana ny harafesina ary ny fenitra maharitra maharitra. Ankoatr'izay, ataonay antoka koa fa ireo rotavator ireo dia manaraka ny fenitra indostrialy manjaka.
1GQN ROTARY TILLER MAHASOA FAHAROA
1.1 GQN andian-tsarimihetsika mavesatra rotary amin'ny alàlan'ny fifindran'ny sisiny, azo alefa amin'ny traktera 25-180hp izy io.
2.Gantry-type Bracket dia matanjaka kokoa.
3. Ny masininay dia mampiasa boaty vy vy goavam-be miaraka amin'ny fanodinana tonga lafatra, tanjaka ambony noho ny boaty vy vy. Ary manana lavaka solitany hita eo amboniny izy io mba hanamorana ny fampiasanao azy.
4. Ajustable Front Pin dia misy lavaka roa hanamorana ny fanitsiana anao.
5.Ny paleta mampiasa ny famolavolana S-streamline, dia mandray dingana manokana, manatsara be ny tanjaka, ny fisaka ambonin'ny aorian'ny fambolena, ny mari-pahaizana mifehy kokoa.
6.Ny mpamboly Rotary dia amin'ny alàlan'ny tsorakazo nefa tsy misy ny famoahana eo anelanelan'ny plough sy ny ahitra mihantona.
7. Izy io dia mandray antsy maranitra L-type izay mipetaka amin'ny seza antsy kapila.
Ny vodiny, ny vokatry ny tany dia ho avo lavitra noho ny fitaovana nentim-paharazana. Amin'ny hafainganam-pandeha iray dia afaka manorotoro mololo izy, mahatratra milina misy tanjona maro.
8. Afaka mampiasa slipper tiller rotary ianao mba hanitsiana ny halalin'ny fiompiana.
9. Anti-tipping dia amin'ny alàlan'ny takelaka misy fifandraisana sy fantsom-by misy rafitra 2 lohataona lohataona izay tokony hahatratrarana. Mety ho sombin-tany tsara kokoa, tsotra kokoa.
10. Takelaka fonosana fonosana vita amin'ny fantsom-pifandraisana mifangaro, mba hahafahan'ny rafitra rehetra mifatotra sy matanjaka kokoa.
11. Ny masinina manontolo dia mandray ny teknolojia polyester mifono na manamboatra varnish teknolojia miaraka amin'ny loko marevaka, ny lokon'ny loko matevina sy mateza.
Teo aloha: Mpamboly rotary pto tsara indrindra ho an'ny traktera
Manaraka: Traktera kely fiompiana kely amidy
6 Ft Rotary Tiller amidy